Ugu yaraan 12 qof oo ku dhimatay qaraxyo ka dhacay Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandUgu yaraan 12 qof oo ku dhimatay qaraxyo ka dhacay Gaalkacyo
Qaraxa oo burburiyay suuqa Xero Dayax oo kuyaala meel u dhow dowlada hoose.
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii labo gaari oo ay wadaan naftood haligeyaal lagu qarxiyay xarunta dowlada hoose ee magaalada Gaalkacyo, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
“Ugu yaraan 12 qof baa dhimatay oo ay ku jiraan dad shacab ah iyo saraakiil booliis ah kadib markii gaariyaal qarax ah lala eegtay xarunta dowlada hoose ee Gaalkacyo saakay.” Axmed Xasan Ciise oo ah dadka deegaanka Gaalkacyo ayaa sidaa khadka taleefoonka ugu sheegay warsidaha Puntland Mirror.
Kooxda hubaysan ee Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarkaas, dhacay maanta oo Axad ah, sida lagu qoray warbaahinta taageerta kooxdaas.
Dhanka kale, saraakiisha dowlada Puntland ayaa si weyn u cambaareeyay qaraxyadaas, iyagoo wacad ku maray in ay sii wadi doonaan dagaalka ka dhank ah kooxda Al-Shabaab ilaa laga soo afjarayo.
Weerarka dhacay maanta oo Axad ah ayaa imaanaya asbuuc kadib markii shan sarkaal oo Al-Shabaab ah oo uu ku jiro nin ajnabi ah lagu soo qabtay howlgal ay si wadajir ah xaafada koonfurta Gaalkacyo uga sameeyeen ciidamada PSF ee Puntland iyo kuwa dowlada federaalka Soomaaliya ee Danab.
December 13, 2016 Ciidamada booliiska qeybta gobolka Nugaal oo magaalada Garoowe ku qabtay 12 kartoon oo khamri ah
At least 12 killed in suicide car bomb attack in Galkayo town
Garoowe-(Puntland Mirror) Taliyihii hore ee ciidamada Daraawiishta Puntland Janaraal Cabdullaahi Cali Mire oo loo yaqaan Carays ayaa maanta oo Arbaco ah ku geeriyooday magaalada Garoowe, ee caasimada Puntland, sida ay xubno katirsan qoyskiisa u xaqiijiyeen [...]
Waxaa soo gabagaboobay kulankii afaraad ee Madasha Wasaaradaha Arrimaha Dastuurka oo ay qabanqaabisay Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya (XFS) kana soo qeybgaleen Wasiirada Dastuurka ee Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka (Puntland, Jubaland, [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiirka Warfaafinta dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow ayaa bayaan ku sheegay in ciidamadoodu ay hoggaamiye katirsan Al-Shabaab oo la dhaho Macalin Cusmaan Cabdi Baadil, iyo saddex dagaalyahan oo kale ay ku dileen [...]